Fall 2016 ịmata ihe | Network Meteorology
Na Septemba 22, oge mgbụsị akwụkwọ banyere na-ahapu oge ezumike nke okpomoku bu onye mbu no.
Dị ka oge atọ ndị ọzọ, mgbụsị akwụkwọ nwere amara na usoro ịmata ihe na i kwesịrị ịma ịmata ntakịrị ihe banyere oge a pụrụ iche nke afọ.
Mgbụsị akwụkwọ 2016 malitere na Septemba 22 na 16: 21 elekere ma kwụsị na Disemba 21, na-amalite oge oyi n'oge ahụ. Ọ bụ ya mere n'oge mgbụsị akwụkwọ ga-adịru ụbọchị 89 na awa iri abụọ.
Mgbụsị akwụkwọ bụ oge nke afọ mgbe ogologo ụbọchị dị mkpụmkpụ ma wee dị mkpụmkpụ. Anyanwụ na-etolite n'ụtụtụ ma na-ada n'isi ụtụtụ n'abalị ka ụbọchị ndị a na-adịkarị mkpirikpi.
Ọchịchọ ọzọ ịmata nke ọdụ a bụ na enwere mgbanwe n'oge, kpọmkwem Sunday ikpeazụ nke Ọktọba. Oge a ka anyị kwesịrị ịhazigharị elekere na elekere atọ nke ụtụtụ ọ ga-abụ abụọ ka ụbọchị ahụ ga-enwe otu elekere.
N'oge a, e nwekwara ọtụtụ mmiri meteor, nke mbụ pụtara na October 8 ma ọ bụ nke Draconids. Mmiri ọzọ a kacha mara amara bụ nke Leonid nke na-eme n’oge Nọvemba 17. Ihe dị ka ọnwa Disemba 13, a na-akpọ mmiri meteor kachasị ike ma akpọrọ Geminids.
Ihe ndị a bụ ụfọdụ n’ime ịmata ihe n’oge dị ka ụbịa. Nke a abụghị oge kachasị chọọ n'afọ Otú ọ dị, ọ bụ oge nke ị pụrụ ịnụ ụtọ a ezigbo obi ụtọ okpomọkụ na-enwe ụbọchị ole na ole dị mkpumkpu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Fall 2016 ịmata ihe
Kedu ebe bụ ebe kachasị egwu ala ọma jijiji na Spain?